PMO ဇနီးမှ: မင်း၊ စစ်သည်တော်၊ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်ကနေ
သင်, တစ်စစ်သည်တော်: တစ် PMO ဇနီးထံမှ
သင့်ကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းငှါ၎င်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရားသည်မီးခိုးရောင်ဖြစ်လေ့ရှိပြီးကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအပြုအမူများမှာများသောအားဖြင့်ပြောင်းလဲမှုအတွက်ပြောင်းလဲရန်အားနည်းသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ မင်းဟာလူဆိုးလို့မင်းမထင်ဘူး
ကျွန်ုပ်ဇနီးတစ်ယောက်ပါ ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်မယောက်ျားက PMO တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုငါလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ငါမနေခဲ့တော့ဘူး။
မင်းကိုအပြစ်ပုံချဖို့ငါမလာဘူး သူ့မှာထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေအများကြီးရှိပြီးကျွန်တော့်ဘဝကိုများပြားလှတဲ့နည်းတွေနဲ့ကြွယ်ဝစေတယ်။ သို့သော်နှစ်ပေါင်းများစွာသူ၏လိမ်လည်ခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်အထီးကျန်ဆန်ခြင်းလိင်မှုကိစ္စပုံစံသည်နာကျင်မှုသည်ပထမ ဦး ဆုံးမထီမဲ့မြင်ပြုမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးယခုနောက်ဆုံးတွင်လျစ်လျူရှုမှုအထိဖြစ်လာခဲ့သည်။ သင်၏မယားသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ရပ်သောအခါ, သူသို့မဟုတ်သူမကြောင့်မဆိုကြာကြာတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းခက်ခဲဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲထွက်ခွာ၏ချောက်ကမ်းပါးပေါ်မှာဆိုလိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်အကွာအဝေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတိုင်းပြည်အနှံ့သူနှင့်အတူဖြစ်ရန်ပြောင်းရွှေ့ရန်မတိုင်မီ3ပတ်, ငါငရဲတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီ၊ ၂၇ နှစ်ရှိပြီ။ သူနဲ့သူနှစ်အတော်ကြာကြာဝိုင်းရံထားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ် ဦး နဲ့စကားပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူရှင်းနေတုန်းပဲ။ porn, က၏ oodles ။ အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုအထောက်အထား။ Erotic စာသားပြောဆိုမှုများနှင့်အခန်းကဏ္ playing မှပါဝင်သည်။
ငါလွှတ်လိုက်ပြီ ငါသူမငါ့ကိုမကျူးလွန်မီမိမိ system ထဲကနေဒီ shit အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကမရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး တစ်စုံတစ်ရာသောပုံစံဖြင့်နှစ်များတစ်လျှောက်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေ၊ အမြဲလိမ်တယ် ငါ့ကိုတစ်ခါတစ်ရံအပြစ်ပုံချသည့်ဆင်ခြေများ
အဓိကသော့ချက်ကတော့သူဟာကိစ္စရပ်တွေကိုသူဘယ်တော့မှပိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူကငါ့ထံမှအရာများကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းနှင့်အထီးကျန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ရွေးချယ်ခြင်းသည်သူတသမတ်တည်းနှင့်သိလျက်ပြုလုပ်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်ကိုသူမမြင်လိုပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့်သူရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည် မိမိကိုမိမိ ဒီကျော်။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က၊ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် သူ့ဆင်ခြေ? အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ်တွင်သူ၏လိင်စိတ်သည်ဆုတ်ယုတ်သွားပြီး၎င်းအားကျွန်ုပ်အားပြောပြရန်ရှက်ရွံ့ခဲ့သည်။ သူကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုသုံးပြီးတစ်ခုခုမှားလားကြည့်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ သူကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုသူ့ဟာသူခွင့်ပြုချင်တာမဟုတ်ဘူး အကွောငျး (ကိုယ်အလေးချိန်မကျခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလည်ပတ်ခြင်းနှင့် testosterone ဟော်မုန်းလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်လိုခြင်းတို့နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း) ။
ကျွန်မတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးမှာလိင်မှုကိစ္စအမြဲစတင်ခဲ့တယ်။ အစဉ်မပြတ်ငါအဆင်သင့်, ဆန္ဒရှိ, ရရှိနိုင်ပါသည်။ ငါ sexy အတွင်းခံ, ခေါ်ဆောင်သွားစကားပြော, ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ထိုသို့အဘယ်သူအားမျှအစဉ်အဆက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ ငါကငါ့ကိုပဲထင်ခဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာချစ်ခင်တွယ်တာမှုအတွက်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအမျိုးသမီးများ (ပုံများ) နဲ့ကျွန်မမယှဉ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုဖို့လုံလုံလောက်လောက်စုဝေးခဲ့တယ်။ ဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်ပါ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ထပ်မံ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုထပ်မံတွေ့ရှိပြီးနောက်သနားခြင်းကရုဏာစိတ်ကိုကြိုးစားရှာဖွေခဲ့သည် သူ့ကိုလာမည့် ၆ လအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏လိင်မှုကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုရန်သူကြိုးစားခဲ့သည်။ သူသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိအမျိုးသမီးများအတွင်းခံအဝတ်အစားများ၌အမျိုးသမီးများကိုစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်သည်ကိုနောက်ဆုံးတွင်သူကနောက်ဆုံးပြောကြားခဲ့သည်အထိ“ အကယ်လို့ဒီ (စကားပြောဆိုမှုများ) ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ငါဖြစ်ချင်နေပြီ” ပြောဖို့အဆင်သင့် "က fuck ဆိုတဲ့။ "
သူကသွယ်ဝိုက်ငါ့ကိုအပြစ်တင်ပါတယ်။ ဇီဝဗေဒနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို ၀ မ်းနည်းစရာပဲလို့ပြောပြီးသူ့လိင်တံလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်။ သူလုပ်သမျှအခြားဘာမှအရေးမကြီးဘူး သူ့ကိုငါသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်၊ သူလုပ်ပေးတာတွေအားလုံးကိုငါတန်ဖိုးထားလေးစားကြောင်းဘယ်လောက်ငါသူ့ကိုသတိပေးခဲ့တယ်၊ ၎င်းသည်သူ၏ပြissuesနာများ၏နောက်ကွယ်အကြောင်းရင်းနောက်ကိုထပ်မံရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။
ဒါကစကားပြောဆိုမှုငါ့အဘို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါက ၅ လလောက်ရှိပြီ။ ကြောင်းစကားပြောဆိုမှုပြီးနောက်ငါပိတ်ပစ်။ သူကကျွန်တော့်ကို ၅ လလုံးလုံးကြိုးစားကြည့်ပြီး“ fuck” လို့ပြောဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ သူ့ရွေးချယ်မှု ၁၀ ​​နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဘာဖြစ်လို့ fuck ဆိုတဲ့ငါမပြောတာလဲ။
ငါသူ့အတွက်တစ်ချိန်ကရှိခဲ့ဖူးသောဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါသူ့ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးသူ၌ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမြင်သော်လည်းသူ၏ရွေးချယ်မှုများကသူအားဆွဲဆောင်မှုမရှိစေပါ။ သူကသူဂရုစိုက်သည်ကိုပြောရန်စကားလုံးများဖြင့်ကြိုးစားသည်။ ငါလှတယ်ငါ့ကိုပြောပြတယ် ငါနဲ့အတူရှိနေခြင်းဟာသူရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပဲ။ ငါကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုငါတန်ဖိုးထားလေးစားသော်လည်း၊ ရဲရင့်သောလှုပ်ရှားမှုများမပါဘဲ (ဥပမာ - သူ၏ပစ္စည်းများကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်နှင့်စကားပြောခြင်း၊ ၎င်းအကြောင်းတွေးတောခြင်း) သည်သူ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက်အလွန်နောက်ကျသွားပြီ။
ဒီတော့ငါဘာလို့ဒီဇာတ်လမ်းကိုပြောပြရတာလဲ တဖန်သင်တို့ကိုငါစစ်ကြောစီရင်မည်။ ငါမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ငါထင်ပါတယ်ရှက်ကြောက်ခြင်းပေါ်ဆွဲထားခြင်းသည်ဤပြbeyondနာထက် ကျော်လွန်၍ ကြီးထွားရန်သင့်အတွက်အဆိုးဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရှက်ကွဲခြင်းကိုသင်တားဆီးထားသည်။
တစ်ခုတည်း၌နေသောသူသငျသညျမြားနှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်သူတို့အား: ငါကဒီမှာကလူနှစ်မျိုးအဘို့အကြှနျုပျ၏ပုံပြင်ပြောပြပါ။ သငျသညျတစ်ခုတည်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျအနာဂတျမှာကျန်းမာရေရှည်ဆက်ဆံရေးမျိုးလိုလျှင်သင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့မဟုတ်မိတ်ဖက်သို့ဆောင် ခဲ့. , ရှေ့တော်၌ယခုစစ်တိုက်ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလုံးဝသငျ့ဆကျဆံရေး၏ဝိညာဉျကိုကိုစို့ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအအရာအားလုံးထက်, သင်သည်မသက်ဆိုင်သင်ဘယ်လိုကြင်နာ, ဒါမှမဟုတ်ရယ်စရာ, ဒါမှမဟုတ်ဆွဲဆောင်မှု၏, သင့်ရွေးချယ်မှုသင်နှင့်သင့်သိသာသည်အခြားအကြားထားအကွာအဝေးအားဖြင့်မရရှိသေးပါလိမ့်မည်ပါဘူး။
သင်သည်လက်ထပ်ပြီးသို့မဟုတ်ရေရှည်လက်တွဲမှုရှိပါကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသင်၏ပြissuesနာများကိုသိလျှင်၊ စကားလုံးများသည်အထူးသဖြင့်စကားလုံးများသာလာလျှင် ပြီးနောက် သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသင်နှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်သည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသင်၏ရေရှည်ရည်ရွယ်ချက်များကိုယုံကြည်ရန်ဤအချက်ကို ကြိုတင်၍ ကိုင်တွယ်ရမည်။ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ဇနီး / မည်သူမဆိုနှင့်အတူရိုးသားပါ။ သို့သော်သင်၏ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွင်ပြုလုပ်ပါ။ သင်ကလိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက် ပို၍ ညစ်ညမ်းမှုကိုရုန်းကန်နေရကြောင်းကိုကြားရန်အဆင်သင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သူမ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုက၎င်းကိုယူရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ ဒါပေမဲ့မင်းကသူမကိုခဏတာလိင်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုပြောပြပါ။ သူမပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းမှာအချိန်နှင့်နေရာလိုတယ်။ ကျန်တဲ့သင့်ဘဝတစ်လျှောက်အတူတကွပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့နဲ့သင့် shit ကိုအတူတကွစုစည်းဖို့အတွက်အချိန်လိုအပ်တယ်။
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုဆုံးရှုံးရခြင်းအကြောင်းအရင်းမှာပြောင်းလဲမှုအတွက်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ ကြာရှည်မခံပါကသင့်ကိုမကူညီနိုင်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်၏အကြောင်းပြချက်များ၊ “ ငါရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တယ်၊ မင်းဘာကြောင့်မင်းကိုရှာရတာလဲ သင်၏ WHY သည်အပြုသဘောဆောင်ပြီးသင့်အတွက်ဖြစ်ပါကပိုကောင်းသည် (ဥပမာ -“ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရင်းနှီးမှုနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုရလိုသည်။ ”)
သင်ဤပြproblemနာကိုစွဲလမ်းသူအဖြစ်ရှုမြင်ပြီးသင့်ကိုကူညီရန်ဘာသာရေးကိုသင် ဦး ထုပ်တင်ထားနိုင်သည် ((ကျွန်ုပ်သည်ဘာသာတရားကိုဤနေရာတွင်ခေါက်နေခြင်းမဟုတ်ပါ)) သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင်သင်ကိုယ်တိုင်၎င်းအတွက်တာ ၀ န်ယူခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်“ ကျွန်ုပ်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သော်ဘုရားသခင့်အကူအညီကိုလိုအပ်သည်” သို့မဟုတ်“ ကျွန်ုပ်သည်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း” မှလွယ်ကူသက်သာစေသည်။
သင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်၌ရှိကြ၏။ နှင့်ဤပြဿနာသည်သင်၏ Self-တန်ဖိုးရှိ၏ရောင်ပြန်မဟုတ်ပါဘူး။ ငါရန်သူကဲ့သို့အစား, မြင်ရန်သင့်အားတိုက်တွန်းကြသည်။ တဖန်သင်တို့နှင့်အတူစစ်မှာရှိပါတယ်။
သင်လဲသောအခါ၊ ချော်သည့်အခါ၎င်းကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာပျက်ကွက်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါ။ အဲဒီအစား, သူရဲကဲ့သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ မျဉ်းကြောင်းထဲမှာအားနည်းချက်များကိုအဘယ်မှာရှိသနည်း သူတို့ကိုတက်ပေးပါ။ ရန်သူသည်သင့်ထက် သာ၍ ခွန်အားရှိသလော။ ၎င်းကိုသတိပြုပါ။ (ဥပမာ၊ အကယ်၍ Facebook ကသင့်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဆိုပါကငရဲကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ၊ ကာလ။ ) နှင့်ပြန်လည်စုစည်းပါ။ မင်းဟာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပါ။ သင်ဟာစစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမဟာဗျူဟာသမားပါ။ PMO ကိုသင်၏ဘဝ၊ သင်၏အိမ်ထောင်ရေး (လက်ရှိသို့မဟုတ်အနာဂတ်) အတွက်ရန်သူအဖြစ်ရှုမြင်ပြီး၎င်းနှင့်အညီစစ်ဆင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရာတစ်ခုလုံးကိုဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျရှုမြင်ရန်ခွင့်ပြုပါ။ အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ မင်းဒါမဟုတ်ပါ သင်ဤထက်ပိုပြီးခွန်အားကြီးသည်။ အဲဒါကိုသင်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ် သို့သော်သင်သည်စစ်တိုက်ရာတွင်သင်၏ခေါင်းကိုရပြီး၎င်းနှင့်အညီတိုက်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။
အားလုံးနီးပါးမျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးသွားသည့်အခါကြိမ်ရှိလိမ့်မည်။ သူတို့အားကြိမ်မှာတော့သင်အကြိုက်ဆုံးစစ်တိုက်-type အမျိုးအစားရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်တီဗွီရှိုးပေါ်တွင်တင် (Terminator မှဗာဗုလုန်မြို့5ရာသီ3နှင့်4မှတစုံတခု။ သင့်ရဲ့လှေရှိသတဲ့ဘာပဲ) ။ သင်၏ရန်သူအဖြစ် porn နှင့် fapping ကိုကြည့်ပါ။ ပြန်ဆွဲထုတ်, သင့်လက်နက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, သင့်ကာကွယ်ရေး။ အသက်ရှူ။ သင့်ရဲ့နည်းဗျူဟာ Rework ။
အောင်ပွဲအတွက်သင်၏အကြောင်းပြချက်ကိုရှာပါ။ ငါတို့ရဲ့တကယ့်ကမ္ဘာလိုပဲအောင်ပွဲဟာဘယ်တော့မှထာဝရမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားပါ။ အားကြီးသောတိုင်းပြည်၊ စစ်သည်၊ အကြောင်းတရားသည်၎င်းကိုဆန့်ကျင်ရေးဆွဲမည့်ရန်သူများကိုအမြဲသတိထားရမည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်၏ခွန်အားသည်သင့်ကိုသယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးခလုတ်များကိုပိတ်ထားခြင်းသည် Neo သည် Matrix ရှိအရာအားလုံးကိုတကယ်မြင်နိုင်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည် - effortless ။
နှလုံးရှိသည်။ အားတင်းထားသည်။ ထိုအရှိရာသို့အလျင်အမြန်အကြာတွင်ထက်ထိုသို့ပြုကြ၏။